नीलकण्ठ नगरपालिकामा भ्रष्टाचार : ‘नक्कली अक्सिजन प्लान्ट’ जडान गरेर ३३ लाख झ्वाम ! | Diyopost - ओझेलको खबर नीलकण्ठ नगरपालिकामा भ्रष्टाचार : ‘नक्कली अक्सिजन प्लान्ट’ जडान गरेर ३३ लाख झ्वाम ! | Diyopost - ओझेलको खबर
दियो पोस्ट बुधबार, साउन १३, २०७८ | १६:१९:०६
धादिङ, १३ साउन । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले कोभिड १९ विशेष अस्पतालमा जडान गरेको अक्सिजन प्लान्ट नक्कली भएको खुलाशा भएको छ । नगरप्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाको मिलेमतो र निर्देशनमा अक्सिजन प्लान्ट भनेर घरमा प्रयोग हुने अक्सिजन जेनेरेटर अर्थान कन्सन्ट्रेटर जडान गरेको पाइएको हो ।
नगरपालिकाले स्थापना गरेको अक्सिजन जेनेरेटर
तस्विर ः इकान्तिपुर डटकम
नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्टको ठेक्का निकालेर अक्सिजन प्लान्ट जडान नगरि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरेको पाइएको हो ।
कोभिड १९ को दोस्रो महामारीकै बीचमा नगरपालीकाले गत गत जेठ ७ गते अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । नगरप्रमुख ढुंगानाले जिल्लामै पहिलो पटक नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको भन्दै मिडियाबाजी गरेका थिए ।
गत जेठ २१ गते कोभिड १९ अस्थायी अस्पतालमा पहिलो पटक २ वटा मिनि अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ३३ लाख लगानीमा २ वटा मिनि अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको भन्ने खबर छापिएको थियो । नगरप्रमुख भिम प्रसाद ढुंगाना र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले संयुक्त रुपमा उक्त अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गरेको २ दिनमै अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएपछि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको थियो । नगरपालिको प्लान्टको ठेक्का गरेर अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरेको कागजातबाट देखिएको छ ।
अक्सिजन प्लान्टबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि दियोपोस्टले सुचनाको हक प्रयोग गर्दै गत असार १९ गते सुचना अधिकारीसमक्ष खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात माग गरेको थियो । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा सुचना माग गरेको १ हप्ता भित्र सुचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि निलकण्ठ नगरपालिकाले सुचना दिन आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
निकै प्रयास गरेपछि नगरपालिकाले विवरण उपलब्ध गराएको छ । तर, विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम भने लुकाइएको छ ।
प्लान्टको ठेक्का जोडियो कन्सनट्रेटर !
गत जेठ ७ गतेको ठेक्का आह्वानको सुचनामा नगरपालिकाले ‘सप्लाई डेलिभरी एण्ड इन्स्टलेशन अफ अक्सिजन प्लान्ट’ भनेर प्रोजेक्टको नाम राखिएको छ । कुल लागत ४० लाख ८४ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ कुल लागत देखाइएको छ । तर, जेठ १६ गते प्रकाशित ठेक्का स्विकृतिको सुचनामा भने ‘सप्लाई, डेलिभरी एण्ड ईन्स्टलेशन अफ अक्सिजन प्लान्ट÷जेनेरेटर’ लेखिएको छ । उक्त ठेक्का स्विकृतिको सुचनामा बाँके नेपालगन्जमा कार्यालय रहेको श्री कर्णाली मेडिकेयर प्रा.लीलाई ठेक्का स्विकृति भएको उल्लेख छ । नगरपालिकाले उक्त ठेक्का प्रतिष्पर्धामा कुन कुन कम्पनिले भाग लिए भन्ने खुलाएको छैन । स्रोतका अनुसार कर्णालीलाई सेटिङ गरेर मेयर ढुंगानाका सल्लाहाकारले ठेक्का दिलाएका थिए ।
उक्त कम्पनिले अक्सिजन प्लान्टको सट्टा २ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेर ल्याएर जडान गरिदिएको थियो ।
कम्पनिले नगरपालिकामा पेश गरेको विवरणमा मेडिटेक कम्पनिको ‘एमडि’ २० मोडलको २ थान अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रति जेनेरेटर १२ लाख २५ हजार रुपैयाँको २ वटा जेनेरेटर २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको बिलमै उल्लेख छ ।
त्यसै कन्सन्ट्रेटरमा ६ लाख ९२ हजार ५ सय रुपैयाँको पाइपलाइन जडान गरिएको विलमा उल्लेख छ ।
इन्सपेक्सन रिपोर्टमै कसरी आयो ठेकेदारक कम्पनिको नाम ?
नगरपािलकाले जिल्ला अस्पतालका बायोमेडिकल टेक्निसियनलाई लगाएर इन्सपेक्सन रिपोर्ट बनाएको देखिन्छ । टेन्डर हुनुअघि नै अर्थात वैशाख २३ मै तयार पारिएको इन्सपेक्सन रिपोर्टमा ठेकेदार कम्पनि कर्णाली मेडिकेर प्रा.लीको नाम उल्लेख छ । ‘ठेक्का दिनुअघि नै सोही कम्पनिको नाम इन्सपेक्सन रिपोर्टमा छ भने त्यो मिलेमतो हो,’ एक इन्जिनियर भन्छन्,‘मिलेमतोमा ठेक्का दिलाएर प्रतिष्पर्धाको आवरण दिनु ठाडै भ्रष्टाचार हो ।’
सल्यान काण्ड दोहोरिएको आशंका
गत पुसमा सल्यान जिल्ला अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्टको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानले ४० लाख रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्टको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर, २ देखि ३ लाख रुपैयाँमा पाइने २ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरेर प्लान्ट निर्माण भएको प्रचार भएपछि भ्रष्टाचार भएको पाइएको थियो । निलकण्ठ नगरपालिकाले पनि अक्सिजन प्लान्टको ठेक्का खोलेर २ वटा कन्सन्ट्रेटर जडान गरेको भेटिएपनि कुनै निकायले छानबीन गरेको छैन ।
अक्सिजन प्लान्ट र जेनेरेटरमा आकाश जमिनको फरक छ : बायोमेडिकल इन्जिनियर
अक्सिजन प्लान्टको ठेक्का गरेर अक्सिजन जेनेरेटर जडान गर्नु भनेको दुनियालाई मुर्ख बनाउने कार्य रहेको बायोमेडिकल इन्जिनियर मदन भण्डारी बताउँछन् ।
‘कन्सन्ट्रेटर र अक्सिजन प्लान्टमा त आकाश जमिनको फरक हुन्छ,’ भण्डारीले दियोपोस्टसँग भने,‘कन्सन्ट्रेटर भनेको घरका लागि प्रयोग हुने चिज हो । त्यसलाई प्लान्ट भन्नै मिल्दैन । प्लान्ट भनेर कन्सन्ट्रेटर जडान गर्नु जनालाई मुर्ख बनाउनु हो ।’
४२ लाखमा जिल्ला अस्पतालमै जडान भयो अक्सिजन प्लान्ट !
नीलकण्ठ नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण भिडाउन नजिकै रहेको जिल्ला अस्पतालमा जोडान भएको अक्सिजन प्लान्ट हेरे पुग्छ । जिल्ला अस्पताल धादिङले ४२ लाख रुपैयाँ लागतमा अक्सिजन प्लान्ट नै स्थापना गरेको छ । ‘अक्सिजन प्लान्टको मापदण्ड हुन्छ । सोही मापदण्ड भित्र जिल्ला अस्पतालले बनाएको अक्सिजन प्लान्ट पर्दछ,’ एक बायोमेडिकल टेक्निसियन भन्छन्,‘तर नगरपालिकाले बनाएको यो अक्सिजन प्लान्ट होइन कन्सन्ट्रेटर हो ।’
धादिङ अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट
जिल्ला अस्पताल धादिङका अनुसार ४२ लाख लागतमा जिल्ला अस्पतालले जडान गरेको अक्सिजन प्लान्टबाट प्रतिमिनेट ८५ देखि ९० लिटरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्नेछ ।
नगरपालिकाले जडान गरेको कन्सन्ट्रेटरले भने प्रति मिनेट २० लिटरमात्रै अक्सिजन दिने जडानमा समलग्न एक इन्जिनियरले बताए ।
घोटालामा को–को समलग्न ?
निलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख विष्णु रिजालले आफू अक्सिजन प्लान्ट जडानको समयमा नरहेको बताए । ‘मलाई थाहा छैन । यो विषयमा शिव रानालाई सोध्नु होला,’ उनले भने ।
यता नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत शिव रानालाई सम्पर्क गर्दा आफूहरुले अक्सिजन प्लान्ट नै जडान गरेको जवाफ दिए । ‘त्यो कन्सन्ट्रेटर होइन । जेनेरेटर प्लान्ट हो । ठेक्कामा जेनेरेटर प्लान्ट भनेको छ । त्यहाँ हेर्नुस् त एकपटक,’ झूट बोल्दै रानाले भने,‘इन्सपेक्सनमा बकाइदा राम्रोसँग लेखिएको छ ।’
टेन्डरमा प्लान्ट भनेर पछि किन कन्सन्ट्रेटर जोडियो भन्ने दियोपोस्टले प्रश्न गर्दा उनले भने ‘वास्तविकता बुझेर मात्रै फोन गर्नुस् । अक्सिजन प्लान्ट र जेनेरेटरमा के फरक छ ? भेटेर कुरा गरौँ प्लिज । म जवाफ दिन बसको होइन । मैले नै समन्वय गरेको हुँ ।’
जिल्ला अस्पतालले जडान गरेको अक्सिजन प्लान्ट र आफुहरुले जडान गरेको अक्सिजन जेनेरेटर एकै रहेको उनले बताए । ‘क्षमता फरक हुनसक्छ । यो पनि प्लान्ट नै हो । ५ लिटर हुनसक्छ, १० लिटर हुनसक्छ,’ उनले भने ।
रानाले अक्सिजन प्लान्ट नै भएको दाबी गरेपनि कोभिड अस्पतालमा भने मेडिटेक कम्पनिको एमडि २० मोटलको कन्सन्ट्रेटर जडान गरिएको छ ।
बुधबार, साउन १३, २०७८ | १६:१९:०६